Imandarmedia.com.np: कम्युनिष्ट पार्टीको चेतावनीपछि एनसेलले तिर्यो १३ अर्ब ६० करोड कर, कति छ बाँकी ?
Big News, Business » कम्युनिष्ट पार्टीको चेतावनीपछि एनसेलले तिर्यो १३ अर्ब ६० करोड कर, कति छ बाँकी ?
कम्युनिष्ट पार्टीको चेतावनीपछि एनसेलले तिर्यो १३ अर्ब ६० करोड कर, कति छ बाँकी ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दिएको चेतावनीको करिब एक वर्षपछि एनसेलले कर बुझाएको छ । अर्बौ रुपैयाँ बढी कर छल्दै आइरहेको नीजि क्षेत्रको मोवाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अन्ततः कर तिर्न बाध्य भएको छ । एनसेलले यही सोमबार १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई तिरेको छ ।
जनतासँग उठाएको पैसाको निश्चित कर नतिरेर राज्यलाई ठगी गरेको भन्दै नेकपाले वर्षदिन पहिले देशभर एनसेलको २८ वटा टावरमाथि क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि एनसेलका एक प्रतिनिधि टोलीले नेकपाका केन्द्रीय टिमसँग भेट गरी चालू आ.व.भित्र पूरै मात्रामा कर तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । सोहीबमोजिम आ.व. ०७३/०७४ को अन्त्यमा तिरेको हो ।
‘हामीसँग पूरै कर तिर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो, तर उसले थोरै मात्रा तिरेको छ । बाँकी सबै तुरुन्त तिर्नुपर्छ’ नेकपा एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पूरै कर नतिरे एनसेलले बेइमानी गरेको ठहरिने उनको तर्क छ ।
एनसेलले नेपाली जनताबाट सेवाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ असुलेर राज्यलाई कर नतिर्ने र नगद विदेश पलायन गरिराखेकोले जनताको अनुरोधमा त्यतिबेला एनसेलमाथि कारवाही गरिएको उसले जनाएको थियो । त्यसपछि पनि उसले कर तिर्न पटकपटक पहल जारी राख्दै आएको छ ।
एनसेलले छली गरेको लाभकर ४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुईपटक गरी २३ अर्ब ६० करोड तिरेको छ । अब तिर्न बाँकी २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि तत्काल तिर्न नेकपाले आग्रह गरेको छ । साथै उसले एनसेलले जनसत्तालाई पनि कर तिर्नुपर्ने र सरकारले तिरेको करको प्रमाण दिन पनि भनेको छ ।
पटकपटक खरिदबिक्री हुँदै आइरहेको एनसेल अहिले अजियाटा कम्पनीले संचालन गरिहेको छ ।
२०७४ जेठ २४ मा प्रकाशित ।
Trending : Big News, Business